Ezinụlọ nke ndị mba ọzọ bi na Russia nwere ike ịbanye mba ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Ezinụlọ nke ndị mba ọzọ bi na Russia nwere ike ịbanye mba ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ezinụlọ nke ndị mba ọzọ bi na Russia nwere ike ịbanye mba ugbu a.
Mịnịsta mba ofesi Russia kwupụtara na a ga -enye ikike ịbanye na mba ahụ mgbe ha gosipụtara otu akwụkwọ na -akwado ọnọdụ mmekọrịta, dị ka akwụkwọ alụmdi na nwunye, akwụkwọ ọmụmụ na akwụkwọ ndị ọzọ ma ọ bụ ntọala onye nlekọta ma ọ bụ onye nlekọta.
Amachibidoro mgbochi COVID-19 ịbanye na mpaghara Russia anaghị emetụta ndị ezinụlọ nke ụmụ amaala mba ọzọ na ndị na-enweghị steeti bi na Russia na-adịgide adịgide.
Tupu ugbu a, ọ bụ naanị ndị ezinụlọ ụmụ amaala Russia nwere ohere ịbanye Russia.
Ọ bụ ndị ozi mba ofesi Russia malitere mgbanwe a na -eso nsonaazụ ọtụtụ arịrịọ.
Ngalaba Consular nke Russia Ministry of Foreign Affairs ekwuputara na ọwa Telegram taa, na mmachibido iwu metụtara COVID-19 nke amachibidoro ịbanye na Russia ebuliwo maka ndị ezinaụlọ nke ụmụ amaala mba ọzọ na ndị na-enweghị steeti bi na mba ahụ.
“Mmachibido iwu nke COVID-19 ịbanye na mpaghara Russia anaghị emetụta ndị ezinụlọ nke ụmụ amaala mba ọzọ na ndị na-enweghị obodo na-ebi ebighi ebi. Russia (ya bụ, inwe ikike obibi na Russia). Ndị otu ezinụlọ gụnyere di na nwunye, nne na nna, ụmụaka, ụmụnne, nne na nna ochie, ụmụ ụmụ, nne na nna kuchiri, ụmụaka e kuchiri ekuchi, ndị na -elekọta ha na ndị na -elekọta ha, ”ozi ozi nke Ozi Mba Ofesi Russia na -agụ.
The Ofesi Ofesi akọwapụtara na ntinye nke ndị ahụ kwuru Russia ga -ekwe omume mgbe ị na -ewepụta otu akwụkwọ na -akwado ọnọdụ mmekọrịta, dị ka akwụkwọ alụmdi na nwunye, akwụkwọ ọmụmụ na akwụkwọ ndị ọzọ ma ọ bụ nguzobe onye nlekọta ma ọ bụ onye nlekọta.
“Ọ bụrụ na enweghị nkwekọrịta na njem na-enweghị visa n'etiti steeti nwa amaala nke onye ikwu na Russian Federation, onye na-akpọ oku, onye nọ n'ọnọdụ a bụ onye mbịarambịa na-ebi ebighi ebi. Russia, kwesịrị itinye akwụkwọ na Ministry of Internal Affairs nke Russia ka o nye akwụkwọ ịkpọ oku, nke ga -abụ ihe ndabere maka inweta visa nkeonwe maka onye ikwu ya site na ụlọ ọrụ nnọchi anya Russia, ”Ministri Ofesi kwuru.
Dabere na Ngalaba Consular, ọrụ ime mgbanwe kwesịrị ekwesị na iwu nke gọọmentị nke Russian Federation nke edere na Machị 16, 2020 bụ ndị Minista Ofesi Russia malitere nsonaazụ nke ọtụtụ arịrịọ, gụnyere site na netwọkụ mmekọrịta nke ndị mba ọzọ na -ebi na -adịgide adịgide. Russia, yana ezigbo ndị ikwu ha.
Ministri ahụ gbakwụnyere na tupu nke ahụ naanị ndị ezinaụlọ nke ụmụ amaala Russia nwere ohere ịbanye Russia dịka akụkụ nke ọgụ megide ọrịa coronavirus.